Limited Edition ဖြစ်တဲ့ Kylie Birthday Collection ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » Limited Edition ဖြစ်တဲ့ Kylie Birthday Collection ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ?
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ကြောက်ခမန်းလိလိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကောင်မလေးက ဘယ်သူလဲ? Collection တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်တိုင်း အလုအယက်ဝယ်ရလောက်အောင် နာမည်ကြီးတဲ့သူလေးကဘယ်သူလဲ? သူလေးကတော့ Stormi Webter လေးရဲ့ မိခင် Kylie Jenner ပါ။ သူလေးကတော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကို နာမည်ကြီးပြီး ကမ္ဘာကျော်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း August 10 ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်မွေးနေ့လေးပါ။ အဲ့နေ့မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ Birthday Collection လေးအကြောင်းဖောက်သည်ချချင်လို့။ ဘာလေးတွေပါလဲ ဘယ်လိုအကြမ်းစားဒီဇိုင်းတွေလဲဆိုတာ စပ်စုလိုက်ရအောင်။
-အရောင် ၂၁ ရောင်ပါတဲ့ Birthday Eye Palette $65
-အရောင် ၆ ရောင်ပါဝင်တဲ့ 21 Matte Lipstick $90 ( ဒါတွေက sold out တွေတောင်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်)
-အရောင် ၆ ရောင်ပါတဲ့ Birthday Hello 21 Mini Lip SEbirthday $36 (ဒါလေးတွေလည်းတစ်ချို့အရောင်တွေ sold out ပါတဲ့နော်)
-အရောင် ၃ ရောင် ရှိတဲ့ Birthday Lip Tro $49
-Birthday Make up Bag $20
-Champagne Showers Highlighter $28
-Matte Lip Kit ၃ ခု ( တစ်ခုကို $30 ပါ)
-Glitter eyes ၃ ခု ( တစ်ခုကို $20 ပါ)
စုစုပေါင်း ၈ ခုပါဝင်ပြီးတော့ set တစ်ခုလုံးကို $415 ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ အမှတ်တရနေ့လေးအတွက် ထုတ်ထားတာဆိုတော့ limited edition လေး ဖြစ်တာပါ။
ထွက်လာတာတွေကတော့ အရင်ကနဲ့ သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် admin ကြိုက်မိတာကတော့ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပါ။ ထွက်ခဲ့သမျှပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဒီ packaging ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ မြင်မြင်ချင်းကြွေဆင်းနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကို High end brand ဆန်စေတဲ့အသွင်ကိုပေးတာမို့ အချစ်တို့ကတော့ ကြွေပြီးရင် ကြွေကို ဖြစ်နေမှာပါ။
Product တစ်ခုချင်းစီရဲ့နာမည်တွေကိုလည်း Hello 21, Birthday စတဲ့ နာမည်လေးတွေပေးထားသေးတော့ အရမ်း memorableness( အမှတ်တရ) ဖြစ်စေပါတယ်။
ပြီးတော့ မင်မင်က တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အရောင်တွေ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားတွေကို သေချာလေးပြောပေးမှာမို့ ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဦးနော်။
လက်ရှိခေါင်းလျှော်နေတဲ့ ပုံစံက ထိရောက်မှု ရှိရဲ့လား